Articles Published in April, 2013 | Sagal Radio Services
Xukuumadda oo maamul KMG ah u magacowdey Gedo
Sagal Radio Services • News Report • April 1, 2013
Ra’isul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) iyo wefdigiisa ee ku sugan gobolka Gedo ayaa ku guulestey in ay soo dhisaan maamul KMG ah oo uu yeesho gobolka Gedo, waxaana dadaaladaasi qeyb ka qaaten wax garadka iyo bulshada deegaanadaasi.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo furey shirweyne looga arrinsanayo garsoorka Soomaaliya
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u furay goor-dhaweyd shirweynaha dib u habeynta garsoorka dalka oo socon doona muddo shan maalmood ah, kaasoo looga hadlayo sida ugu habboon ee garsoorka loogu kalsoonaan karo.
Shirweynaha dib-u-habeynta dastuurka oo maalintiisii labaad galay & Ergada oo afar guddi loo qeybiyay (Sawiro)
Ciidamo ka tirsan AMISOM oo Baydhabo gaaray
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ciidamo fara badan oo ka tirsan AMISOM ay saacadihii u dambeeyay ku qul qulayeen, kuwaasoo safar dhinac dhulka ah ku gaaray.
Gunmen shoot dead two officers: Kenyan police
Raysal wasaare Saacid oo Jabuuti gaaray
Sagal Radio Services • News Report • April 3, 2013
Wafdi uu hoggaaminayo raysal wasaaraha Soomaaliya Md. Cabdi Faarax Shirdoon Saacid,ayaa maanta gaaray dalka Jamhurriyadda Jabuuti, halkas oo safar dhowr cisho qaadanaya ay ugu bilaabatay, ayna ku tagi doonaan dalal kale oo ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Khaatumo oo dhegax dhigay dhismaha garoon diyaaradeed
Madaxwenaha Maamulka Khaatumo State Of Somalia Maxamed Yuusuf Jaamac "Indhasheel" ayaa dhagax dhigay dhisme laga bilaabay garoonka Seyid Maxmed Cabdile Xasan ee degmadda Taleex oo xarun u ah maamulkaas.
Guddoomiyaha baarlamaanka oo ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Marxuum Shaati-gaduud
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray Allaha u naxariistee Siyaasiga Xasan Maxamed Nuur (Shaati Gaduud) oo xalay ku geeriyooday dalka Jarmalka.